व्यवसायीक च्याउ खेतीले आकाशलाई दिलाएको सफलता (भिडियो सहित ) — Motivatenews.Com
काठमाडौं – तपाईं केही नयाँ ब्यवसाय गरौं भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? तपाईंलाई बिदेश जानुभन्दा आफ्नै माटो सिँचित गरौ भन्ने लाग्छ ? वा तपाईं बिदेशबाट फर्किएर आफ्नै देशमा केही गर्नका लागि योजना बनाउदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने यो भिडियो तपाईंका लागि अति–उपयोगी हुन सक्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय केही नयाँ काम गरौँ भन्ने सोच राख्नेहरुका लागि च्याउ खेती उपयुक्त विकल्प बनेको छ । आजभोली च्याउको तरकारी नेपालीहरुको भान्सामा अनिवार्य जस्तै छ । त्यसै कारणले च्याउ खेतीले बृहत रुपमा व्यवसायीक रुप लिएको छ । च्याउ खेतीमा नेपालमै पनि विभिन्न परिक्षण र प्रयोगहरु हुन थालेका छन् । व्यावसायिक रुपमै खेती गरि नयाँ प्रजाती र प्रबिधी भित्राउन प्रयासरत नेपाली अझ बढी सफल भएका देखिन्छन् । ती मध्यका एक हुन् मध्यपुर ठिमीका आकाश बाडे ।
नेपालमा रातो च्याउ फलाएर त्यसको औषधिय गुणबारे प्रचार गर्दै एउटा सम्भावनाको ढोका खोल्न सफल बाडेले च्याउ खेती गर्न थालेको १५ बर्ष भयो । आफू यसमा लाग्नुको कारण कृषि प्रतीको लगाव र देशमै केही गरौं भन्ने चाहना रहेको उनको भनाइ छ ।
यसरी विभिन्न पूर्व–व्यवसायमा सफल भएपनि च्याउ खेतीले झै सन्तष्टि अरु कुनै व्यवसायले दिन नसकेपछि उनी निरन्तर यसमै लागिरहेका छन् । तालिम र आवश्यक सिपको अभावमा सँगै यात्रा सुरु गरेका साथीहरू पलायन भएपनि उनी भने आफ्नो लक्ष्यमा अडिग रहे ।
मध्यपुर ठिमी स्थित उनको च्याउ फार्म पुग्ने जो सुकै पनि त्यहाँको रहर लाग्दो उत्पादन र काम गर्ने शैली देखेर मोहित हुन्छन् । ११ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त फार्ममा विभिन्न प्रजातीका च्याउ उत्पादन भइरहेका छन् ।
यी विभिन्न प्रजातिका च्याउ उत्पादन गरेपनि आकाशलाई उनको परिचय भने रातो च्याउले दिएको छ । उनको च्याउ फर्ममा अन्य प्रजातीका च्याउहरु तुलना रुपमा बढि उत्पादन हुने भएपनि रातो च्याउले भने उनलाई ठूलो सफलता दिएको छ ।
यो औषधिय गुणले भरिपुर्ण च्याउ खानुका थुप्रै फाइदाहरु छन् । उनका अनुसार रातो च्याउ मानव स्वास्थ्यका लागि अति उपयोगी रहेको छ । यसले थुप्रै रोगहरुको निदान समेत गर्ने गरेको बाडेको भनाई छ ।
अबसरको मात्रै चर्चा गरिरहँदा च्याउ खेतिमा समस्या नभएका भने पक्कै होइनन् । नेपाली किसानका च्याउ उत्पादन र बजारिकरणका समस्यै समस्या छन् । तर ती समस्यको निराकरणका लागि बाडेसँग धेरै उपाएहरु पनि छन् ।
२०७७ फागुन ४ गते प्रकाशित